Ciidamada Ruushka Oo Soo Bandhigay Gawaadhi Ciidan Oo Aad U Casri ah | Saxil News Network
Ciidamada Ruushka Oo Soo Bandhigay Gawaadhi Ciidan Oo Aad U Casri ah
Hargeysa(Saxilnews)Ciidamada Ruushka ayaa soo bandhigay gawaadhi cusub oo ay sameeyeen wershadaha ciidamada ee hoos taga wasaaradda gaashaandhiga dalkaasi, iyadoo ay ku baxday lacag aad u badan.Gaadhigan oo ah nooca lagu magcaabo Rover ( Baghi) ayaa xawaarihiisu yahay mid socon kara 130 KM/saacadii-ba. isagoo qaadi kara ilaa lix askari iyo hubkoodu u dhamaystiran yahay, waxa kale oo uu leeyahay meel lagu qaadan karo rasaasta fudud iyo waxyaabaha saadka ah ee ciidamada.
Sidoo kale gaadhigan oo lagu sameeyey xeryaha ciidamada ee Chechnya , ayaa waxaa sharaxaad ka bixiyay madaxa qaybta amaanka ee ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Chechnya Daniel Martynov.
Waxaanu sheegay in gaadhigani uu yahay nooc cusub oo ka dheeraynaaya noocii ay toddobaadyo ama bilo ka hor soo saareen ee is-na cus-baa.
Waxa kale oo uu sheegay in gaadhigan dhererkiisu gaadhayo ilaa 4 Meter, sidoo kale-na culayskiisu yahay 1.5 tan. Waxaanu leeyahay is-gaadhsiin u gaar ah oo saldhigyada ciidamada toos ugu xidhan iyo sidoo waxyaalo uu hubka iskaga difaaci karo.
Sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in ciidamadoodu tijaabiyeen gaadhigaasi oo ah gaadhi aad u csri ah, isla markaana u fudud loo adeegsan karo. Isagoo geli kara meelo kala duwan oo ay adag tahay inay gawaadhida waaweyn ee ciidamadu gelaan.
Gaadhigan waxa gacan weyn ka gaysatay shirkadda samaysa gawaadhida Sports-ka ee lagu magcaabo F Motors Sports , iyagoo tijaabo ahaan iyo dib u habayn ahaan-ba si weyn uga qayb qaatay.
Waxaanu baabuurakani ka mid noqonayaa gawaadhida shirkadaasi gacanta weyn ka gaysatay ee lagu guulaystay.